वाह! नेपाली दर्शक | Nagarik News - Nepal Republic Media
वाह! नेपाली दर्शक
५ चैत्र २०७३ ९ मिनेट पाठ
काठमाडौं- एक समय थियो क्रिकेट ‘खेल्नेलाई मुर्ख र हेर्नेलाई महामुर्ख’ को रुपमा हेरिन्थ्यो। जर्ज बर्नाड शाँले भनेकै भरमा त्यस्तो धारणा विकास भएको थिएन। बरु उनले क्रिकेट र यो खेलप्रति समाजको धारणा बुझेर त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेका थिए।
प्राचिन कालमा क्रिकेटको स्वरुप पनि त्यस्तै थियो। खेल सकिने समयसिमा तोकिएको हुदैनथ्यो। तर समय फेरिएको छ। सबैभन्दा लामो स्वरुपको टेस्ट पनि बढिमा ५ दिन सम्ममात्र चल्छ। पचास ओभरको एक दिवसीय हुदै अहिले २० ओभरको ट्वान्टी–२० स्वरुपले लोकप्रियता कमाइरहेको छ।
क्रिकेटमा फेरिएको संरचनासँगै योसँग जोडिएका धारणा पनि परिवर्तन हुदै छन्। ‘खेल्ने मुर्ख हेर्ने महामुर्ख’ को भनाई पूरा परिवर्तन भइसकेको छ। मैदानमा पुगेर हेर्नमात्र होइन घरमै बसेर हेर्न चाहनेका लागि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न टेलिभिजनहरुले करोडौं डलर खर्चिने गरेका छन्। टिकट किनेर मैदानमै गएर हेर्नेमात्र होइन टिभीमै आँखा गाड्नेहरुको संख्या दशौं करोड पुगिसक्यो।
नेपालमा क्रिकेटको औपचारिक इतिहास त्यति लामो छैन। तर छोटो समयमै यसको लोकप्रियता ग्राफ अचम्मसँग बढिसकेको छ, अझै बढ्दो छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकमा त्र कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय टोली उत्रनुमात्र पर्छ, समर्थकको भिडले मैदान भरिन्छ। मौरीले रानोलाई ढाकेजस्तै समर्थकले भरिन्छ त्रिवि मैदान। पर्खाल भित्रमात्र होइन, टिकट नपाएर छिर्न नपाउनेको भिड बाहिर झन बढि हुन्छ।
यसै साता नेपालले आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत केन्याविरुद्ध दुई खेल खेल्यो। शुक्रबारबाट परेको वर्षाले पहिलो खेलको दिन शनिबारसम्म पनि निरन्तरता पायो। पानी परेको बेला क्रिकेट खेल्न मिल्दैन। त्यसैले खेल हुने निश्चित थिएन। तर, झरीका बीच पनि मैदान छिर्न बिहानैबाट दर्शकको लामो लाइन कीर्तिपुरमा लागिसकेको थियो। नेपाली समर्थकको क्रिकेट लगावलाई त्यो दिन मौसमले पनि सम्मान गर्‍यो। पानी पर्न रोकिपछि ३ घन्टा ढिलो गरि खेल शुरु भयो। खेलकै बीच पनि पटक–पटक पानीले खेल रोकियो। तर दर्शक विचलित भएनन्। उनीहरुको धैर्य टुटेन। खराब प्रकाशका कारण खेल रोकिने जोखिम बुझेका नेपाली दर्शकले मोबाइलको बत्ति बालेर सांकेतिक रुपमा खेल चलाउन दुवै टिम, निर्णायकहरु तथा अम्पायरलाई आग्रह गरे।
दर्शकको लगाबसँग नेपाली क्रिकेटकर्मी परिचित थिए नै। यसले आइसिसीबाट आएका अधिकारी र भ्रमणकारी टोलीलाई प्रभावित गर्‍यो। त्यही दृष्यलाई क्यामरामा कैद गरेका आइसिसी ग्लोबल डेभलपमेन्ट प्रमुख विलियम ग्लेनराइटले टि्वट गरिहाले, ‘नेपालमा क्रिकेटप्रेमीको संख्या उल्लेख्य छ। केन्याविरुद्धको खेलमा मोबाइल बत्ति बालेको दृष्य रोमाञ्चक छ। उक्त खेलमा भ्रमणकारी विजयी भए।’
नेपालले आइसिसीको एसोसिएट सदस्य राष्ट्र हो। एक दिवसीय मान्यता पाउनका लागि लामो समयदेखि नेपालले गरिरहेको संघर्षले अझै गन्तव्य पाइसकेको छैन। तर, कतिपय टेस्ट खेल्ने देशकै भन्दा बढि दर्शक उपपस्थित गराएर नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई लोभ्याएको छ। एसोसिएट राष्ट्रमा यस्तो दर्शक उपस्थिती देखेर नेपाल आउने टोलीका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरु आश्चर्यमा पर्छन्।
केन्याविरुद्धको त्यही दर्शक मोहबाट प्रभावित बनेका नेदरल्यान्डका विकेटकिपर वेस्ले वरेसीको टि्वट यसको एउटा दरिलो प्रमाण हुन सक्छ। उनले तीनदिन अघि टि्वट गरेका थिए्, ‘नेदरल्यान्ड्स र नेपालबीच ३ एक दिवसीय र ३ ट्वान्टी–२० खेल्न सम्भव छ। त्रिवि मैदानको त्यो वातारणमा अद्भुत छ।’
केन्याका प्रशिक्षक स्टिभ टिकोलो पनि त्रिवि मैदानमा उपस्थित दर्शकको प्रशंसा गर्नबाट पछि हटेनन्। आफ्नो देशमा दर्शक संख्या न्युन रहने भन्दै उनले थपे, ‘हाम्रो देशमा मुक्लिलले ५ सयको हाराहारीमा दर्शक उपस्थित हुन्छन्। तर यहाँ हरेक खेलमा १० हजार भन्दा बढिको उपस्थिती हुन्छ,’ टिकोलोले भने, ‘एसोसिएट राष्ट्रमा कतै पनि यो संख्यामा दर्शक उपस्थिती देख्न सकिदैन। नेपालको क्रिकेट क्रेज उदाहरणीय छ।’
आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग अन्तर्गत गतवर्ष भएको नामिबियाविरुद्धको खेलबाट अनलाइनमार्फत टिकट विक्री प्रबन्ध गरिएको थियो। नामिबिया र केन्याविरुद्धका दुवै खेलमा टिकट विक्री जिम्मा लिएको इशेवाका अनुसार नामिबियाविरुद्ध दुवै खेलमा १० हजारभन्दा धेरै र केन्याविरुद्धको दुवै खेलमा ११ हजारको हाराहारीमा टिकट विक्री भएको छ। त्यसभन्दा अघि पनि त्रिवि मैदानमा उपस्थित दर्शक व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने गरेको सुरक्षाकर्मीहरु सम्झन्छन्।
क्रिकेटप्रतिको यस्तै आकर्षणका कारण आइसिसीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आइसिसीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को सदस्यता निलम्बनमा राखेको छ। यसका बावजुद पनि यहाँको दर्शक मोहकै कारण आइसिसीले नामिबिया र केन्याविरुद्धको खेल नेपालमा गराएको थियो।
‘हामीलाई यहाँ आएर खेल गराउनै पर्छ भन्ने छैन। तर, यहाँ क्रिकेटप्रति दर्शकको जुन माया छ, त्यसले हामीलाई आकर्षित गर्छ। त्यसैले नेपालमा खेल गराएका हौं,’ आइसिसी छनोट प्रतियोगिताका निर्देशक गुरजीत सिंहले केन्याविरुद्धको खेल दैरान भनेका थिए, ‘नभए हामीलाई यहाँ आएर दुःख गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’
नेदरल्यान्ड्सका विकेटकिपर वरेसीले टि्वटमार्फत नेपाल आउने उत्कट चाहना व्यक्त गरिसकेका छन्। औपचारिक रुपमा पनि नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डले नेपालको यो माहोलमा आएर खेल्ने इच्छा बारम्बार प्रकट गरेको नेपाली क्रिकेट अधिकारीहरु बताउँछन्।
आइसिसी एसोसिएट तथा एफिलिएट प्यानलका अम्पायर देवेन्द्र सुवेदीले पनि एसोसिएट राष्ट्रमा यस्तो माहोल कतै नहुने भन्दै नेपालले समर्थकको यो उत्साहबाट फाइदा लिनु पर्ने बताए। ‘एसोसिएट राष्ट्रमा यस्तो माहोल कही हुदैन। अफगानिस्तानमा विस्तारै माहोल बढ्दै छ। तर नेपालमा जस्तो हुदैन। त्यसैले तटस्थ खेलका लागि पनि नेपाल उत्तम थलो हो। तर बिडम्वना यहाँ क्रिकेट संघ नै निलम्बनको अवस्थमा छ। सधै आइसिसी आएर यहाँ खेल गराउन सम्भव छैन। त्यसैले क्रिकेट विवाद चाडो समाधान गरेर अघि बढ्ने हो भने नेपालमा क्रिकेटको भविष्य राम्रो छ।’
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७३ ०८:३१ शनिबार
वाह नेपाली दर्शक